PSG Oo Ku Dhawaaqday Qiimaha Ay Ku Iibinayso Rabiot Iyo Kooxaha U Dhaqaaqi Karaya Heshiiskiisa – Cadalool.com
PSG Oo Ku Dhawaaqday Qiimaha Ay Ku Iibinayso Rabiot Iyo Kooxaha U Dhaqaaqi Karaya Heshiiskiisa
Kooxda ree France ee Paris Saint-Germain ayaa u muuqata mid ugu dambayn iska caabintii ka baxday isla markaana doonaysa inay iibiso xiddiga kooxdeeda ee Adrien Rabiot oo ay mudo isku cakirnaayeen waxaana ay haatanba shaaciyeen qiimo ay ku doonayaan madaxiisa.
Haatan waxa kaliya ee cad ayaa ah khilaafka ka dhexeeya Adrien iyo kooxdiisa haatan ee PSG, Kooxda ree France ayaa ka warqabta inay aad u adkaan doonto inay xiddigan ceshadaan maadaama oo heshiiskiisu dhacayo dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Haddaba, Paris ayaa isku diyaarinaysa inay xiddigan haatanba iska iibiyaan si ay lacag uga helaan halkii ay qaab xor ah ku waayi lahaayeen waxaana ay xuseen lacagaha lagu heli karo.
PSG ayaa aqbali doonta dalab ku kacaya 15 Milyan oo xiddigan laga soo gudbiyo, Qorshahan ayaa ah mid kasoo horjeeda qorshaha Veronique Rabiot oo ah wakiilka iyo hooyada xiddigan oo aaminsan in haddii wiilkeedu uu qaab xor ah ku baxo uu heli doono mushahar badan iyo gudo saxeex oo badan.
Rabiot ayaan qayb ka noqon doonin xiddigaha kooxdiisa ee u safraya Qatar isagoo u baaqanaya sababo qoys darteed gaar ahaan caafimaadka aabihii, Marka laga yimaado hakadka xiddigan waxa doonaya kooxaha kala ah Barcelona, Chelsea, Bayern Munich iyo Tottenham.
Tottenham and Chelsea ayaa ahaa labada kooxood ee ugu dambeeyay ee xiddigan dalab ka gudbiya, Spurs ayaan doonayn bixinta mushaharkiisa oo ay aaminsan yihiin inuu qas ka dhex dhalin karo safkooda halka Blues ay u doonayaan bedelka Cesc Fabregas.
Dhinaca kale, Barcelona oo ah kooxda inta ugu badan saxeexa Rabiot doonaysa ayaa la filayaa inay fursadan ka faa’idaysato marka laga yimaado inay caqabad ku noqon karaan xidhiidhyada xun ee PSG kala dhaxeeya.
Rabiot ayaa dhibaatoon doona haddii uu koox ku biiri waayi gudaha suuqa bishan maadaama oo ay Paris u sheegtay inuu kursiga keydka ku qudhmi doono oo uusan mudo lix bilood ah ciyaari doonin.